Wararka Maanta: Khamiis, Mar 1 , 2018-Askari ka tirsan ciidamada dowladda oo toogasho ku dilay Darawal Gaari Bajaaj
Khamiis, Maarso, 01, 2018 (HOL) - Askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku Sugnaa Barkontorool oo ku taalla waddada shaqaalaha ayaa xalay si bareer cad ah u toogtay Wiil Mooto Bajaajle ah, kadib markii uu dhexmaray muran afka ah.
Goob joogayaal ayaa sheegay in darawalka rasaastu ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa, markii danbena uu uu dhaawacii soo gaaray ugu geeriyooday isbitaalka Daarushifa.
Dhalinyaro Mooto Bajaajlayaal ah oo falkan ka jawaabayay ayaa Banaanbax ka dhigay wadada Maka Al-mukarama, taasi oo keentay in Askariga gacanta lagu soo dhigo, laguna xiro saldhiga degmada Waaberi.
Intaasi kaddib dhalinyaradii oo aanan ku qanacsaneyn in Asariga uu ku xirnaado saldhiga degmada ayaa dalbaday in la geeyo xarunta dambi baarista ee CID-da, ugu dambeyna Hay’adaha ammaanka ayaa aqbalay codsiga, halkaasi oo hada lagu baarayo Askariga.
Dhinaca kale subaxnimadii hore ee saakay kooxo hubeysan ayaa ku dilay degmada Hilliwaa wiil dhalinyaro ah oo magaciisa lagu soo kooay Cumar oo sida la sheegay ka mid ahaa dhalinyarada degmada.
Kooxdii toogashada geystay ayaa la sheegay in ay goobta ka baxsadeen, waxaana halka uu dilka ka dhacay tagey ciidamo ka tirsan dowladda.